Google က ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ သင်တွေးဘူးလား??? - PX
ရေးထားတဲ့စာကိုမဖတ်ကြည့်ရသေးပဲ ခေါင်းစဉ်ဖတ်ကြည့်ပြီး ဒီ Page က Google မုန်းသူ Google မကောင်းပြောတဲ့သူထင်ပြီး Ha Ha react ပေးချင်ပေးသွားလို့ရတယ်။ ဒီ reaction တွေအပေါ် ကျွန်တော်တို့ emotion ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ပါ။ Google ဆိုတာကြီး မုန်းရအောင်လို့လည်း စာရေးသူ ပြည်မကြီးမှာ နေထိုင်သူမဟုတ်ပါ၊ နောက်တစ်ခုက စာရေးသူက ဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့အတွက် အလုပ်အတွက်မှမဟုတ် နေစဉ် ကိုယ့်ရဲ့ Life Style တစ်ခုမှာ Google ဆိုတာကြီးက မပါမဖြစ်သလောက်ကိုရှိနေတဲ့အတွက် မုန်းဖို့မပြောနဲ့ မရှိတော့ရင်တောင် မနေတတ်တော့မှာသေချာပါတယ်။
တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ် Google ရဲ့ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုက လုံး၀ အံမခန်းမှာပါပဲ။ ဒီလိုတိုးတတ်မှုတွေကနေပဲ Google က တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ Dark Side ဘက်ကိုရောက်လာသလို ဖြစ်လာပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီ ဆောင်းပါးမှာရေးတဲ့စာတွေက စိတ်ကူးယဉ်ပြီး တစ်ဖက်သက်အတွေးနဲ့လျောက်ရေးထားတာမဟုတ်ပါဘူး များသောအားဖြင့် ကိုးကားထားတာတွေရှိပါတယ်။ Google က ဘာလို့ Evil ဖြစ်လာလဲဆိုတာ 2018 ခုနှစ်က ကြောက်ဖို့ကောင်းသော Futurism က ဆောင်းပါးတစ်ခုနဲ့ ယနေ့ခေတ် US နဲ့ China ပြဿနာကြားထဲက Google နဲ့ Huawei အကြောင်းကို တူးဆွသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၀၀ ခုနှစ်လောက်က Google ရဲ့ တရားမဝင်ဆောင်ပုဒ်လေးတစ်ခုက Don’t be evil ပါ။ ဒါပေမဲ့ အချိန်အနည်းငယ်ကြာလာတဲ့အခါ Google က သူရဲ့အလုပ်သမားတွေအတွက် ဒီ ဆောင်ပုဒ်ကို Code of Conduct မှာ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ အဲ့တုန်းက Don’t be evil ဆိုတာ Code of Conduct ရဲ့ ထိပ်ဆုံး Motto တစ်ခုအနေနဲ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ Alphabet (Google ရဲ့ Parent Company) က Google ရဲ့ Motto တွေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ Motto တွေထဲမှာ Don’t be evil လည်းပါဝင်ခဲ့ပြီး အဲ့အစား Do the right thing ဆိုပြီး ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ ပြောင်းလဲခဲ့စဉ်တုန်းက Don’t be evil ဆိုတဲ့ စာသားကို မဖြုတ်ခဲ့ကြပေမဲ့ 2018 April အကုန် May အစောပိုင်းမှာ Google က မှဖယ်ရှားလိုက်ပါတယ်။ ဖယ်ရှားခဲ့ပေမဲ့ Final line မှာ Mention တစ်ခုထားခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒါက…
စာဖတ်သူ အောက်ပါအတိုင်း တွေးကောင်းတွေးနိုင်ပါတယ် “Don’t be evil အစား Do the right thing အစားထိုးတာနဲ့ Don’t be evil ကိုဖြုတ်လိုက်တာက အသေးအမွှားလေးပဲ ဒီကိစ္စနဲ့ Google Evil ဖြစ်တာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲလို့” ပေါ့။ အဲ့လိုတွေးမိလိုက်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အတွက် တစ်ကယ့်ကို အသေးအဖွဲလေးပါ ဒါမဲ့ Google အတွက် ကြီးမားတဲ့ ပြောင်းလဲချက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ Google ရဲ့ Android အသုံးပြုတဲ့ ဖုန်းအရေအတွက်က Market share မှာ 74% ကျော်ပါတယ်။ ဒီလို Android ဖုန်းမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Personal Data တွေကို နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနေကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာကို Google Search Engine ကနေရှာကြမယ်၊ အလုပ်နဲ့သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်တွေကို Gmail ကနေပို့ကြမယ်၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Data နဲ့ Photos/Videos တွေကိုလည်း Google Drive မှာသိမ်းနေကြတယ်။
ဒါတွေကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ နေစဉ်အမျှဖြတ်သန်းနေတဲ့ ဘဝမှာ Google က ကျွန်တော်အပေါ်ဘယ်လောက်ထိ လွှမ်းမိုးနေလဲဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ တစ်ကယ်လည်း Google ရဲ့ Services တွေက အရမ်းကိုကောင်းပါတယ် ဒါမဲ့တစ်ဖက်ကနေ ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် လူသားဆန်တဲ့ စာကြောင်းလေးဖြစ်တဲ့ Don’t be evil ဆိုတာကို ဖြုတ်လိုက်ကတည်းက Google က Evil တစ်ကောင်ဖြစ်မလာဘူးလို့ ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရပါဘူး။ အကယ်လို့ Google သာ Evil ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Data တွေက Power ကြီးမားတဲ့ Evil တစ်ကောင်ရဲ့ လက်ထဲမှာပါ။ ပြီးတော့ Google ဆိုတာက အင်အားကြီးမားတဲ့ Company တစ်ခုဖြစ်သလို သူမှာ ဘာမဆိုလုပ်နိုင်တဲ့ အနေအထားလည်း ရှိပါတယ်။ Google က သူရဲ့ Power တွေကို လူသားတွေအတွက် ကောင်းတဲ့ဖက်က အသုံးချမှာလား Evil ဖြစ်ဖို့အသုံးချမှာလားဆိုတာ သေချာမသိနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အောက်ပါ အကြောင်းအရာတွေက Google အပေါ်စာဖတ်သူအမြင်တွေပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။
ကိစ္စရပ်တစ်ခု ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းဆိုတာ တစ်ဦး တစ်ယောက်ရဲ့ ခံယူချက်သာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အတူပဲ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ အကုသိုလ်ဟာလဲ တစ်ခြားတစ်ယောက်အတွက်တော့ အဗျာကတာ (အကုသိုလ် ကုသိုလ် မဟုတ်တဲ့စိတ်) တစ်ခုသာ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ March 2018 လအတွင်းမှာ ထွက်လာတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ Google က US Department of Defense ရဲ့ Project တစ်ခုမှာ ကူညီပေးနေကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို Project ကတော့ အငြင်းပွားဖွယ်များစွာ ရှိနေတဲ့ Project Maven ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Project Maven ဆိုတာဘာပါလဲ?
စစ်ပွဲများတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် AI အသုံးပြုထားတဲ့ Drones များ တည်ဆောက်ရန် ပဏာမ ခြေလှမ်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ထို ကိစ္စရပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထောင်ပေါင်းများစွာသော ဝန်ထမ်းများက ကန့်ကွက်ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အသနားခံစာ တင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲ့တုန်းက ဝန်ထမ်းတွေက အလုပ်ထွက်စာပါတင်ပြီး ကန့်ကွက်မှုများရှိခဲ့ပါတယ်။
သို့သော်လဲ Google ကတော့ ထို Project Maven အောင်မြင်ဖို့ရန်သာ ြကိုးစားနေဆဲဖြစ်ပါတယ်… ဝန်ထမ်းတွေ အဆို အရတော့ Google company ဟာ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အတွေး အမြင်ကို ဂရုမစိုက်တော့ပဲ စစ်တပ်ရဲ့ စစ်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်သာ စိတ်ဝင်စားမှု တဖြည်းဖြည်း မြင့်မားနေပါတယ်တဲ့။ စစ်ပွဲဆိုတာလည်း လူလူချင်းသတ်ဖို့ နှစ်ဖက်သောလူတွေဖန်တီးထားတဲ့ မငြိမ်းချမ်းသောတရားဆိုတော့ Google က ဒါမျိုးတွေမှာဝင်ပါနေပြီလား??
လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်း သည် တခြားသောဗျာကတာ တစ်ခု သာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုနည်းတူ Google သည်လည်း လမ်းကြောင်းတစ်ခုတွင်မျှောပါ လိုက်နေရတာ သက်တောင့်သက်သာရှိဟန်တူပါတယ်။ Engadget ကို ဝန်ထမ်းများရဲ့ပြောကြားချက်အရတော့ Google မှာ ယခင်ကလို ဝန်ထမ်းများနှင့်သာမက လူထုအပေါ်တွင်လည်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိတော့ ပါဘူး…
2018 March လောက်မှာ Company က သူတို့ရဲ့ Google Assistant’s new Duplex feature ကို ပြသခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ Features ထဲမှာ Pixel ဖုန်းတွေမှာပဲရသေးတဲ့ Call Screen feature ကိုလူတွေအတော်သဘောကျကြခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါမဲ့ ဒီပြသခဲ့တဲ့ Feature က ကြောက်ဖို့ကောင်းနေတယ်ဆိုတာကို လူတွေမေ့နေကြတယ်။
သရုပ်ပြမှုမှာ AI က အသုံးပြုသူအစား ဖုန်းခေါ်ဆိုပြီး အလုပ်တွေလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့စွတ်စွဲချက်တွေအရ Demo ပြသထားသော ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုက Faked ဖြစ်ပြီး AI တွေက ဘယ်တော့ လူသားတွေကဲ့သို့ သူတို့ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူး ဒါက နည်းပညာလှည့်စားမှု တစ်နည်းအားဖြင့် AI မဟုတ်ဘူးလို့ သံသရတွေဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ Smart ဖြစ်လွန်းတဲ့ ဒီ Call Screen feature က တစ်ကယ်လား အတုအပလားဆိုတာ ကျွန်တော် မသိပေမဲ့ Google က တစ်ကယ် အစစ်အမှန်ကဲ့သို့ Pixel ဖုန်းတွေမှာထည့်သွင်းထားလိုက်ပါပြီ။
တွေးကြည့်ရင် Google မှမဟုတ်ဘူး AI တွေရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ ကြောက်ဖို့ကောင်းတာတော့ သေချာပါတယ်။ ဥပမာ Google AI ကို ကျွန်တော်တို့ လှမ်းခေါ်မယ် (သို့) Apple မှာဆိုရင်လည်း Siri ကိုကျွန်တော်တို့ ခေါ်ကြည့်မယ် “Hey Siri” or “Ok Google” စသဖြင့် အသံပေးလိုက်ရင် ဒီ AI တွေက ချက်ချင်းကိုထထူးကြတယ်။ စဉ်းစားကြည့်ပါ ကျွန်တော် ပါးစပ်ဖျားက “Hey Siri” “Ok Google” စတဲ့အသံတွေထွက်လာတာကို သိဖိုက ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ စကားတိုင်းကို နားထောင်နေမှ သိမှာလေ… ဒါဆို ကျွန်တော်အနားမှာရှိတဲ့ ဖုန်းတွေက ကျွန်တော်တို့ ပြောသမျှကို အချိန်တိုင်း နားထောင်နေတာလား???
“Elon Musk က AI တွေက လူသားတွေရဲ့ “Biggest Risk” တစ်ခုလို့ပြောခဲ့သလို Stephen Hawking ကလည်း AI တွေကပဲ လူသားမျိုးနွယ်ကို အဆုံးသတ်နိုင်တယ်လို့ ပြောဆိုဖူးပါတယ်။” :(
2016 လောက်က Google ရဲ့ Internal Video တစ်ခုကို The Verge Media က ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ရရှိခဲ့တဲ့ Video ရဲ့နာမည်ကတော့ “The Selfish Ledger” ပဲဖြစ်တယ်။ The Verge ရရှိခဲ့တဲ့ Video ထဲမှာ Digital DNA တစ်ခုကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်အသုံးပြုနေတဲ့ Smartphone တွေကနေတစ်ဆင့် Desoptian Word တွေကို ပေါင်းစပ်ပြီး Physical DNA နဲ့တူတဲ့ Digital DNA ကိုဖန်တီးဖို့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ Google က ဒီလို အချက်အလက်များကို အသုံးပြုပြီးတော့ လူသားတွေရဲ့ အနေအထိုင် ပြောဆို ပုံများကို ထိန်းချုပ်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Google ကလည်း ဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့ပက်သက်ပြီး ဝန်ခံခဲ့ပါသေးတယ်။ စမ်းသပ်ချက် Project တစ်ခုသာဖြစ်ပြီး လက်ရှိ အနာဂတ်နဲ့ပက်သက်တဲ့ Project တွေနဲ့ လုံးဝမသက်ဆိုင်တော့ပါလို့လည်း ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒီ Selfish Ledger ကို ဖြစ်အောင် မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ပြောလို့ မရပါဘူး။ Google က ကျွန်တော်တို့လူသားများအတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် နည်းပညာ လုပ်ရပ်တွေကိုလဲ ဖန်တီးနေတာလည်း မှန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်း ဖြတ်သန်းတဲ့ Lifestyle ထဲမှာ Google ကလည်း မပါမဖြစ်တဲ့နေရာမှာလည်းရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Google သာ မကောင်းဆိုးဝါး တစ်ကောင်ဖြစ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင် ဖြစ်လာမည့် အကျိုးဆက်တွေကတော့ ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာတော့ စာဖတ်သူတွေရိပ်မိမယ်ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေ မသိလိုက်ပဲ Google ရဲ့ Project တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခု မပေါ်လာပဲပျောက်သွားတာတွေရှိပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ အချို့ကိစ္စတွေမှာ ဝန်ထမ်းတွေတောင် မသိရပဲ လုပ်ဆောင်နေတယ်တို့ ဘယ်သူကိုမှ ဂရုမစိုက်တော့ဘူးတို့ စသဖြင့် ပြောဆိုတာတွေများလာပါတယ်။ Google ရဲ့ ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Google Pixel ဖုန်းတွေဆိုတာ စာရေးသူ သဘောကျတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေထဲက တစ်ခုကပါ။ ဒီထုတ်ကုန်တွေကေ Android လောကမှာ တစ်ဖြည်းဖြည်း ကြီးစိုးချင်တာလာတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့နေရပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ Pixel ဖုန်းတွေမှာပဲ Exclusive Feature တွေပါဝင်ပြီး အခြား ဖုန်းတွေအတွက် အပေါ်ယံ အငွေ့ပဲရှူဆိုတဲ့ ပုံစံတွေပြောင်းလာတာကိုမြင်ရပါတယ်။
ဟိုတလောဖြစ်သွားတဲ့ Huawei နဲ့ ပြဿနာမှာဆိုရင် Google ရဲ့ လုပ်ခဲ့တဲ့ သတ္တိက Huawei အတွက်မှမဟုတ်ပဲ အခြား Brand တွေအတွက်ပါ ထိတ်လန့်စရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Smartphone ဈေးကွက်မှာ Samsung ပြီးရင် ဒုတိယ အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ Huawei ကို ဖြုတ်ချလိုက်တာက Trump ရဲ့ ဖိအားပေးမှုကြောင့်ပါသလို သူကိုယ်တိုင်လဲ အခြား Brand တွေကို သတိပေးလိုက်သလိုပဲ။ ဆိုလိုတာက ဒုတိယဈေးကွက်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ Huawei လို Brand မျိုးတောင် ဖြုတ်ချရဲတယ်ဆိုရင် အခြား ဈေးကွက်နည်းတယ်ဆိုတဲ့ Brand တွေလောက်တော့ ဂရုမစိုက်ဘူးလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ ဈေးကွက်ပျက်သွားရင် ရောင်းအားကျမှာဆိုတာကို တွေးထားကြမှာပါ။ ဒါကြောင့်လဲ Google ဈေးသက်သာတဲ့ Pixel 3a လို Line up နဲ့ ပြန်ထိန်းချုပ်နေတာလားဆိုတာ ပြောလို့မရပါဘူး။ Android ကိုင်ချင်ရင် Pixel ပဲကိုင်ကွာဆိုတဲ့ စကားကို သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ပြောနေသလိုဖြစ်နေပါတယ်။
Huawei ကို Ban လိုက်တဲ့ ပြဿနာကိုကြည့်ရင် အခြား Brand တွေကလည်း Google ကိုယုံကြည်မှုရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ အချိန်မရွေးငါတို့လည်း Ban ခံရနိုင်တာပဲဆိုတဲ့ စိတ်ကိုတော့ တွေးထားမိကြမှာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း Huawei ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် OS စမ်းသပ်မှုမှာ OPPO နဲ့ Xiaomi က စမ်းသပ်ပူပေါင်းကြတာနေပါလိမ့်မယ်။ တရုတ်မဟုတ်တဲ့ အခြားသော Samsung တို့ LG တို့ SONY တို့လည်း Google အပေါ်သံသယဝင်မိကြမှာပါ။ Samsung လည်း ကိုယ်ပိုင် OS ဖြစ်တဲ့ Tizen OS ကို ဖုန်းတွေအပေါ်ရောက်မလာသေးပေမဲ့ အရောက်ပို့နိုင်အောင် Backup အနေနဲ့ ပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုတာလည်း ပြောလို့မရပါဘူး။ အရင်တုန်းက အေးဆေးပါကွာလို့ တွေးထားတာတွေ လက်ရှိအချိန်မှာ ပြင်ဆင်နေမှာ သေချာပါတယ်။ Huawei အပေါ် ပိတ်ပင်မှုတွေ ဖြေလျော့လိုက်ပြီဟု ပြောဆိုနေသော်လည်း Huawei ကလည်း ၂ ခါတော့ အမိုက်ခံမယ် မထင်ပါ လက်ရှိသူ့ရဲ့ ဈေးကွက်ထဲထွက်ပြီးသား ဖုန်းတွေအတွက် Google ကို မချစ်တော့သော်လည်း အောင့်ခါနမ်းပြီး ဈေးကွက်ကို ထပ်ထိန်းထားမှာ သေချာပါတယ်။ ဒါမဲ့ US နဲ့ တရုတ် ကြားထဲမှာ ခံရတော့ Huawei က နောက်တစ်ချိန်မခံရအောင် သေချာပေါက် သူ့ကိုယ်ပိုင် OS အတွက် ပြင်ဆင်နေမှာ သေချာပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ OS တစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ လွယ်ပါ့မလား လူတွေ သုံးပါ့မလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းရဲ့ အဖြေကို ဖြေစရာတောင်မလိုဘူးထင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Android တို့ iOS တို့နဲ့ ရင်းနီးပြီးသားလူတွေက အခြား ဘာမှမရှိသေးတဲ့ OS တစ်ခုကိုပြောင်းသုံးဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူလှပါဘူး။ ဒါဆို Huawei ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် OS ကကော အောင်မြင်မှာလားဆိုတာကတော့ အဆုံးခံ အမိုက်ခံ ပြီး အချိန်ပေး ထုတ်လုပ်ရင်တောင် မသေချာသေးပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Google ရဲ့ ရိုက်ခတ်မှုက Huawei ကိုတောင် ထိခိုက်တာမဟုတ်ပဲ အခြား Brand တွေကိုပါ ကိုယ့်စားရိတ်ကို ပြင်ထားတော့လို့ သတိပေးလိုက်တာနဲ့ တူနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် Android ဖုန်းတွေကိုသုံးချရင် Pixel ပဲ ကိုင်ရတော့မလားဆိုတာတော့…
ဘာပဲပြောပြောသော Google သာ နတ်ဆိုးဖြစ်ခဲ့ရင် Genius နတ်ဆိုးဆိုတာတော့ သေချာပါတယ်။
Ref: Futurism, Android Authority & The Verge